कोभिड १९ विरुद्धको खोपलाई लिएर डब्ल्यूएचओ आँफैले दियो एस्तो सुखद खबर, विश्वभर खुशीयाली ! – Butwal Sandesh
कोभिड १९ विरुद्धको खोपलाई लिएर डब्ल्यूएचओ आँफैले दियो एस्तो सुखद खबर, विश्वभर खुशीयाली !
जेनेभा २० भदौ -विश्व स्वा’स्थ्य संगठनले को’भिड १९ विरुद्धको खो’प निस्केपछि पनि आगामी वर्ष सन् २०२१ को मध्यसम्ममा मात्र उपलब्ध हुन सक्ने बताएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रमुख वैज्ञानिकले यो खोप आइसकेपछि पनि ठूलो मात्रामा बजारमा आउनका लागि कम्तीमा पनि आगामी वर्षको मध्यसम्म लाग्नसक्ने बताउनुभएको हो ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रमुख वैज्ञानिक सोउम्य स्वा’मीनाथनले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनका क्रममा जानकारी दिनुभएको बताइएको छ । उहाँले सो पत्रकार सम्मेलनका क्रममा भन्नुभएको थियो– मलाई लाग्छ यो खोप बजारमाा आ’इसक्नका लागि अर्काे वर्ष अर्थात् सन् २०२१ को मध्यपछि मात्र सम्भव हुनसक्छ । त्यस समयमा खोप बजारमा आउने र त्यसपछि विश्वका विभिन्न देशहरुमा पनि पुग्न सकने देखिएको भन्दै उहाँले त्यसपछि विभिन्न देशहरुमा त्यहाँका नागरिकलाई खोप लगाउन सकिने बताउनुभयो ।
उहाँले उक्त खोपको पछिल्लो लट अर्थात् तेस्रो तहमा हुन लागेको ट्रा’यल यसै वर्षको अन्त्यसम्ममा मात्र पूरा हुने बताउनुभयो ।त्यस ट्रायलको प’रीणाम यसै वर्षको अन्त्यसम्मा या आगामी वर्षको शुरुसम्ममा आइसक्ने र त्यसपछि खोपको उत्पादन प्रक्रिया शुरु हुने जानकारी पनि प्रमुख वै’ज्ञानिकले दिनुभयो